Fakàna ny mariky ny fandaniana: nanara-maso teny an-kianja ny Tale Jeneraly | JIRAMA
Fakàna ny mariky ny fandaniana: nanara-maso teny an-kianja ny Tale Jeneraly
Manohy ny asany andavanandro ireo mpaka ny mariky ny fandaniana any an-tokantrano na dia eo aza ny fihibohana. Zava-dehibe ny fahazoan’ny JIRAMA ny tarehimarika tena izy mba hisorohana ny mety ho fahadisoan’ny faktiora.
Isan’ireo orinasam-panjakana manohy ary manamafy ny asany andavanandro ny JIRAMA amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao.
Ankoatra ny famatsiana jiro sy rano dia manatanteraka ny asany ihany koa ireo « Releveurs » izay maka ny mariky ny fandaniana any an-tokan-tranon’ny mpanjifa. Efa misy fepetra manokana noraisin’ny orinasa JIRAMA hiarovana ny ain’ireo mpiasa izay mifanerasera akaiky amin’ny mpanjifa.
Omaly 06 Jolay, nanara-maso ny fanatanterahin’izy ireo ny asany ny Tale Jeneralin’ny JIRAMA Vonjy Andriamanga izay nanentana ny mpanjifa handray azy ireny hahafahana mahazo ny mariky ny fandaniana tena marina ary hanara-maso ihany koa mba hisorohana ny mety ho fahadisoan’ny tarehimarika.
Raha toa ka misy antony avy amin’ny mpanjifa tsy hahafahana maka izany mariky ny fandaniana izany dia entanina ny mpanjifa hanome izany ny JIRAMA ary ny volana manaraka no hanaovana ny fampitahana.